UkuJongwa kokuGcinwa komthetho kunye nokugcinwa kwemfihlo e-Asia | Izisombululo ze-OMG
Eyona ngxaki inkulu yamasebe amapolisa asebenzisa iikhamera zokurekhoda zamapolisa, kukuba kwimeko yoxinzelelo, uMmeli ukhumbula ukurekhoda ikhamera. Unokwenzeka, phantsi koxinzelelo, iAgent ayikhumbuli nokuba uphethe ikhamera kwaye ngenxa yoko ulahlekelwe bonke ubungqina obucacileyo obubandakanya ukuba nevidiyo kunye nokurekhodwa kwento eyenziwa ngamapolisa.
Enye yeengxaki ezinkulu zokhuseleko ngubani olawula thina nendlela. "Obu bubuchwephesha obunamandla okwenyani bokusebenza njengolawulo kunye nokulwa amandla kupolisa,"
Phantse alungenelelo lwamapolisa ngaphandle kohlaselo lomzimba: ubundlobongela obenziwa ngamapolisa buyanda. Ezi khamera zibizwa ngokuba zincedisana nokumbeka. Iikhamera, ezisetyenziswa kwiyunifomu, zirekhoda uhlaselo kwaye zisebenza njengendlela yoxinzelelo, kunye nokuqinisekisa ubungqina.
Amapolisa angawasebenzisa xa kukho isoyikiso sobundlobongela kwaye akwindawo yoluntu. Into ekufuneka beyenzile kukwazisa umntu ochaphazelekayo ukuba yonke into iya kurekhodwa kwividiyo. Uninzi lwamazwe aseAsia sele zisebenzisa iikhamera zomzimba. Nokuba zichasene nengcinezelo yabahlaziyi beenkcukacha, ababona ilungelo elisisiseko lokuzenzela ulwazi. Ngokwamapolisa, isiphumo sasinkulu: uninzi lwabehlaseli bamodareyithwa, kwaye iindibano zenkundla ezalandelayo zazilula ngokurekhodwa. Kwangelo xesha, kunokwenzeka ukuba ujonge ukuba amapolisa awenze ngokuchanekileyo na.
Eyona nto ingcono malunga neekhamera zamapolisa kukuba bathwebula imifanekiso yeentlanganiso zamapolisa nabantu, kubandakanya abarhanelwa, amangqina kunye nabantu abadlulayo. Izinto ezirekhodiweyo zinceda ukugcina onke amaqela ethembekile kwaye ebavumela ukuba bafumane ukuthembana, besazi ukuba nantoni na umntu ayithethayo malunga nokusebenzisana inokungqinwa kamva.
Kukho ukubakho kwexabiso lokhuseleko loluntu kwenye itekhnoloji: ukwamkelwa kobuso. Ungahlalutya iimpawu zomntu ukuze uzithelekise neeprofayili ezigcinwe kwiziko ledatha, ezinje ngeelayisensi zeSebe leZithuthi. Iimpawu zeminwe zobuso zedijithali ezenziwe ziinkqubo zokwazisa umfanekiso zingasetyenziselwa ukunceda ukufumana abantu abalahlekileyo abanesifo se-Alzheimer, umzekelo, okanye abarhanelwa bolwaphulo-mthetho, okanye nabani na
Ngoku, ezinye iiarhente zamapolisa zijonge ukudibanisa ezi teknoloji zimbini, zibeka urekhodo lwekhamera yomzimba kuhlalutyo lobonakaliso lobuso.
Oko kuyakwenza ukuba ipolisa ngalinye libe nento efana nesipili.
Inokwenza umzimba ngamnye indawo yokuqokelela, ukugcina nokuhlalutya idatha yobuqu ngaphandle kwemvume yezifundo ezirekhodiweyo. Kwaye uya kuyenza nokuba ezo zifundo azikrokrelwa ukuba wenze kakubi.
Ukuqwalaselwa kobuso, kudityaniswe nemifanekiso yekhamera yomzimba, kunokusetyenziswa gwenxa. Unokulandela umkhondo wobuntu bomntu ngamnye ngalo naliphi na ixesha kwaye ugcine loo datha kwiirekhodi ezisisigxina ukuze zisetyenziswe kamva. Inokusetyenziselwa ukujonga ngokuqhubekayo indawo yoluntu lonke. Uluvo olubi kakhulu. Ingayijongela phantsi yonke injongo yeekhamera zomzimba, ezazibuyisela ukuzithemba emapoliseni.
Itekhnoloji ngokwayo yitekhnoloji: izixhobo ezahlukeneyo eziphucula amandla abantu. Izitshixo zezibonelelo zayo kunye neengozi yimithetho echaza ukuba amandla anokusetyenziswa njani. Iikhamera zomzimba, umzekelo, zinokutshintsha ngokulula, kunokunyuka, ukuthembela emapoliseni ukuba amagosa ayenakho ukufikelela kwimifanekiso nokuba unokulawula usetyenziso lwayo. Ngenxa yoko, iSebe lamapolisa kunye nezinye iiarhente zamkele imithetho efuna ukubhengezwa esidlangalaleni kwemifanekiso ethathwe kwiikhamera zomzimba kwiiveki ezimbalwa zentlanganiso. Indlu yowiso-mthetho yenza okufanayo kunyaka ophelileyo ngokuyalela ukuba nayiphi na iarhente yokunyanzelwa komthetho esebenzisa iikhamera zomzimba zenze ukuba imifanekiso ibekhona eluntwini ngokulinganayo. Abenzi bomthetho ngoku bajonga umthetho oyilwayo ongavimba ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokuqonda ebusweni kunye nemifanekiso yekhamera yomzimba.
Amanye amaqela amapolisa ayayichasa lo mthetho usayilwayo kuba urhulumente akafanelanga awathintele ekusebenziseni izixhobo ezilungiselela umlo kulwaphulo mthetho kunye nokuchongwa kwabaphula umthetho.
Kwaye ngokwenene kukho ulungelelwaniso ekufuneka uluntu lufikelele phakathi kobumfihlo: ukukhululeka kwizixokelelwano zikarhulumente kubomi babucala kunye nokuqiniseka ukuba ukubona ipolisa akuthethi ngokuzenzekelayo ukuba ungene kulwazi lwakho lobuqu nakweyiphi na idata yedijithali. Imvakalelo yokunqanda nje ubuchwepheshe obutsha okanye eyoyikisayo iyaqondakala, kodwa sonke sinokungenelwa kwindlela yokucinga ngakumbi.
Ezinye iintlobo zokuphaphama zenziwe ngobomi beli xesha langoku kwaye ziya kusanda ndawo zonke. Okwangoku ungabhatala idola ezimbalwa kwiikhamera zokhuseleko ezixhunyiwe kwi-Intanethi ezingakuxelela, naphina, ngubani osemnyango wakho. Olo hlobo lwetekhnoloji alusayi kutshabalala.
Ungabelana ngemifanekiso eqokelelweyo nesebe lakho lengingqi, onokuthi emva koko usebenzise ukhuseleko lwakho okanye iinjongo zokujonga. Amasela okupakisha amaninzi abanjiwe esebenzisa imifanekiso eyabiwe namapolisa.
Kodwa ngaba abasebenzisi beenkqubo kufuneka babelane ngemifanekiso namapolisa? Lo ngomnye umcimbi owahlukileyo ngokupheleleyo. Imithetho kufuneka iphuhliswe ukuqinisekisa ukuba itekhnoloji, kunye norhulumente, basebenzela uluntu hayi ngokuchaseneyo.
Umthetho oyilwayo othintela ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokwamkelwa kobuso kunye neekhamera zamapolisa zigcina uluntu phantsi kweliso. Lulwandiso lwendalo kumthetho osayilwayo wonyaka ophelileyo wokuqinisekisa ukuba uluntu ekugqibeleni lunokufikelela urekhodo lomzimba lwekhamera. Iqinisekisa ukuba iikhamera zomzimba ziyaqhubeka nokusebenza njengoko bekucwangcisiwe, ukwandisa ukuzithemba kunyanzeliso lomthetho, endaweni yokugqithisela amandla wetekhnoloji yoluntu emapoliseni.
Enye yeengxaki ezinkulu zokhuseleko ngubani olawula thina nendlela. "Obu bubuchwephesha obunamandla okwenyani bokusebenza njengolawulo kunye nokulwa amandla okupolisa,"
Kukho ukubakho kwexabiso lokhuseleko loluntu kwenye itekhnoloji: ukwamkelwa kobuso. Ungahlalutya iimpawu zomntu ukuze uzithelekise neeprofayili ezigcinwe kwiziko ledatha, ezinje ngeelayisensi zeSebe leZithuthi. Iimpawu zeminwe zobuso zedijithali ezenziwe ziinkqubo zokwazisa umfanekiso zingasetyenziselwa ukunceda ukufumana abantu abalahlekileyo abanesifo se-Alzheimer, umzekelo, okanye abarhanelwa bolwaphulo-mthetho, okanye nabani na.
Ukuqwalaselwa kobuso, kudityaniswe nemifanekiso yekhamera yomzimba, kunokusetyenziswa gwenxa. Unokulandela umkhondo wobuntu bomntu ngamnye ngalo naliphi na ixesha kwaye ugcine loo datha kwiirekhodi ezisisigxina ukuze zisetyenziswe kamva. Inokusetyenziselwa ukujonga ngokuqhubekayo indawo yoluntu lonke.
Uluvo olubi kakhulu. Ingayijongela phantsi yonke injongo yeekhamera zomzimba, ezazibuyisela ukuzithemba emapoliseni.
Itekhnoloji ngokwayo yitekhnoloji: izixhobo ezahlukeneyo eziphucula amandla abantu. Izitshixo zezibonelelo zayo kunye neengozi yimithetho echaza ukuba amandla anokusetyenziswa njani. Iikhamera zomzimba, umzekelo, zinokutshintsha ngokulula, kunokunyuka, ukuthembela emapoliseni ukuba amagosa ayenakho ukufikelela kwimifanekiso nokuba unokulawula usetyenziso lwayo. Ngenxa yoko, iSebe lamapolisa kunye nezinye iiarhente zamkele imithetho efuna ukubhengezwa esidlangalaleni kwemifanekiso ethathwe kwiikhamera zomzimba kwiiveki ezimbalwa zentlanganiso. Indlu yowiso-mthetho yenza okufanayo kunyaka ophelileyo ngokuyalela ukuba nayiphi na iarhente yokunyanzelwa komthetho esebenzisa iikhamera zomzimba zenze ukuba imifanekiso ibekhona eluntwini ngokulinganayo.
Abenzi bomthetho ngoku bajonga umthetho oyilwayo onokuthi uthintele ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokuqonda ngobuso kunye nemifanekiso yekhamera yomzimba.
Ukunyanzeliswa kokuGcinwa komthetho kunye nokugcinwa kwemfihlo e-Asia gqibela ukuguqulwa: Disemba 12th, 2019 by admin
4314 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-4 Namhlanje